एमाले नेता भन्छन् : 'भारतसँग सम्बन्ध बिग्रिँदा नेपालको राष्ट्रियता बलियो हुन्छ भन्ने मान्यताबाट मुक्त हुनैपर्छ' - समसामयिक - नेपाल
भ्रमण मिति कसले तोक्यो ? कुन ठाउँमा आयो ? कता फर्केर गयो भन्ने कुरा मुख्य होइन ।
–राजन भट्टराई, ईपीजी सदस्य
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमण जनकपुर मात्र होइन, नेपाल भ्रमण हो । उच्चस्तरीय भ्रमण आदान–प्रदान हुनु दुई मुलुकका लागि आवश्यक थियो । हाम्रा प्रधानमन्त्री भारत गइरहने, उताबाट नआउने । विगतमा लामो समय दोहोरो भ्रमण हुन पाएन ।
नयाँ संविधान बनाउने क्रममा हामी एउटा निश्चित मान्यताका साथ अघि बढेका थियौँ, त्यसको नेतृत्व केपी ओलीले गर्नुभएको थियो । संविधान घोषणालगत्तै सुरु नाकाबन्दीले स्थिति अरू असहज बनायो । संविधान नेपालको मामिला भएकाले त्यसमा अरूको हस्तक्षेप नहोस् भन्ने अडानमा हामी रहिरह्यौँ । ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएकै बेला नाकाबन्दी पनि खुल्यो । तथापि, आजको युग अनुसार सम्बन्ध अगाडि बढाउन धेरै काम बाँकी छ ।
आजको नेपालीको चेतना र भारतीय नागरिकको चेतना अनुरूप अब दुई देशको सम्बन्ध विकसित गर्ने हो । सन् १९५० मा तय गरिएका अवधारणाका आधारमा अब दुई देशको सम्बन्ध अघि बढ्न सक्दैन । विगतका कतिपय विषय गलत थिए र छन् । कुनै बेला मन्त्रिपरिषद्मै भारतीय प्रतिनिधि बस्ने व्यवस्था थियो । हाम्रो विश्वविद्यालय थिएन । भारतीय नोट चलाउनुपथ्र्यो । कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षा निकायमा सहयोग लिनुपर्ने बाध्यता थियो ।
अहिले त्यो स्थितिमा व्यापक बदलाव आएको छ । विश्व र क्षेत्रीय अवधारणा पनि परिवर्तन भएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मान्यता बनेका छन् । हामीले २१औँ शताब्दीमा दुई स्वतन्त्र मुलुकबीचको सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका आधारमै विकसित गर्न खोजेका हौँ । आमनिर्वाचन ०७४ ले संविधान कार्यान्वयनको बाटो खोल्यो । तीन तहका चुनावमार्फत हामीले जनादेश पायौँ । त्यही क्रममा नै विभिन्न च्यानलबाट भारतीय पक्षसँग प्रधानमन्त्री ओलीको कुराकानी भइरहेको थियो । भारतसित राम्रो सम्बन्ध राख्नकै लागि ती प्रयास भएका हुन् । तर, त्यो सम्बन्धको आधार भनेको दुई सार्वभौम मुलुकबीचको पारस्परिक लाभ, हित र समानता नै हो । यी आधारमा मात्र राम्रो सम्बन्ध स्थापित हुन सक्छ । त्यसकै परिणाम हो, प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण र मोदीको आसन्न नेपाल भ्रमण ।
भारतसँग हामीले राजनीतिक रूपमा माथिल्लो तहमै समझदारी र विश्वास बनाउने प्रयास गरेका छौँ । ओली प्रधानमन्त्री निर्वाचित भइसकेपछि भारतसित सम्बन्ध र विश्वास सिर्जना हुन सक्दैन भनेर जुन प्रचार भएको थियो, स्थिति त्यस्तो होइन भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ । अब सम्बन्धको नयाँ आयामका साथ अगाडि जान खोजिएको छ । नेपाल–भारत सम्बन्धमा सुधार भएको छ र समझदारी बनेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा भएका तीनबुँदे सहमतिले पनि दुई देशको सम्बन्ध सही दिशामै अघि बढेको स्पष्ट हुन्छ । एयर रुट, डुबान समस्या आदिमा भारतसँग खुलस्त कुराकानी भएको छ र सहमतिका साथ अघि बढ्ने भनिएको छ । मोदीको नेपाल भ्रमणमा सहमति भइसकेका विषयको कार्यान्वयन र अरू नयाँ विषयमा सहमति गरेर अगाडि बढ्ने जमर्को हुनेछ । यो भ्रमण त्यसैको सेरोफेरोमा हुन लागेको हो । रामायण सर्किट र अरुण तेस्रो परियोजना शिलान्यासको कुरा पनि यो भ्रमणका महत्त्वपूर्ण विषय हुन् ।
विगतको निरन्तरतामै जोडिएको हुन्छ, विदेश नीति । हरेक मुलुकसँग सुमधुर सम्बन्ध होस् या अरू बहुपक्षीय सम्बन्धमा हाम्रो नीतिमा निरन्तरता रहन्छ । मोदीको भ्रमण मिति र रुट भारतले लादेको होइन, आपसी सहमतिमा तय गरिएका हुन् । केहीले विषयलाई अनावश्यक महत्त्व दिएका छन् । मेरो विचारमा अरू विषय नपाएपछि यस्ता विषय उठाइएको छ । नेपाल–भारत सम्बन्धलाई अनावश्यक ढंगले विवादमा ल्याउने भन्दा पनि हाम्रा विषयवस्तुमा के भइरहेको छ ? त्यो हेर्नु जरुरी हुन्छ । भ्रमण मिति कसले तोक्यो ? कुन ठाउँमा आयो ? कता फर्केर गयो भन्ने कुरा मुख्य होइन । भारतसँग सम्बन्ध बिग्रिँदा नेपालको राष्ट्रियता बलियो हुन्छ भन्ने मान्यताबाट मुक्त हुनैपर्छ । नेपाल र भारत सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्छ, राम्रो हुँदा नै दुइटै मुलुकको हित हुन्छ ।